Ogaden News Agency (ONA) – Febraayo Waa Bisha Murugada iyo Uurkutaalada Soomaalida Ogadenya!! By- Xaaji M/rashiid.
Febraayo Waa Bisha Murugada iyo Uurkutaalada Soomaalida Ogadenya!! By- Xaaji M/rashiid.
Ilaah baa mahad leh, Naxariis iyo nabadna ha ahaadeen Rasuulkii dushiisa. Wuxuu Rabbi Qur’aankiisa ku yidhi وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ * الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ Waxay aayadu si cad u sheegtay qaybo kamid ah waxyaabaha ilaahay ku imtixaamo umadiisa, kadibna kuwii adkaysiga iyo dulqaadka yeeshay ayaa loo bishaareeyay markay u giigsadeen dhibaatadii kuna dhawaaqeen- ilaahayow adigaa naleh xagaagana waanu usoo laaban doonaa. Rasuulkii udgoonaa SCW ayaa la kulmay qoys si xun guumayste u ciqaabayo waxuuna ku yidhi صبراً آل ياسر، فإنَّ موعدَكم الجنة Reer yaasirow adkaysi yeesha balanku waa inaad Janno gashaane.
Waxaan Taariikhdaas usoo qaatay inaan xusuusiyo bulshada sharafta leh in guumaysi diidnimadu tahay dariiq furan, isla markaana waxaa guumaysi,diidaha soo wajihi kara dil foolxun iyo ciqaabyo halis ah, hubka ugu adag ee la isku difaaci karaana waa adkeysiga. Waxaa lala socdaa inay guumaystayaashii reer yurub ku duuleen dunida loogu yeedho caalamka sedexaad wayna adoonsadeen intii karaankooda ahayd, laakiin waxaa xusid mudan inaan lagu soo dhawaynin caleemo qoyan iyo mashxarad siday iyaguba qirayaan. Waxaa loola dagaalamay si ayna marna filaynin taasina waxay keentay in dal waliba ka qaatay xornimadiisii. Xaqiiqadii wanaag buu sheegay gabayaagii carbeed ee yidhi-لَأسْتَسْهِلنَّ الصَّعبَ أوْ أُدْرِكَ المُنى فما انْقادَتِ الآمالُ إلا لِصابِرِ= Wallaahi baan ku dhaartee dhibka sahal baan uqaadan ama waan geeriyoon, mana hogaamiso ididiiladu ruux adkeystay mooyee.
Shacabka Soomaalida Ogadenya oo kamid ahaa umadihii sida lama ilaawaanka ah ula dagaalamay gumaystihii cadaa, xaqna ulahaa inuu xorriyadiisa ka qaato ayaa iyagoon waxba la waydiinin waxaa lagu wareejiyay itoobiya oy waqtigaas talada u hayeen qowmiyadda axmaaradu. Dadka u dhuun daloola siyaasadaas foosha xun waxay ku fasireen inay ahayd aargoosi loola qasday qowmiyadda soomaalida ogadenya. Laga soo bilaabo goortaas ilaa maanta waa maruu socdo dagaal kulul ama mid qabow.
Ururwaynaha ONLF ayaa dib u shiday dhuxushii halganka ee Dambasku dusha ka saraa 1984 waxayna si rasmi hubkooda dhuunta ugu dhigeen Rasaastii 10 sano kadib. Guumaystihii oo arinkaasi u cuntami waayay wuxuu ku jawaabay inuu dadkii nuglaa ka aar goosto isagoo u arka in tilaabadaasi keeni doonto inay bulshado is dhiibto, xaqoodan ka tanaasulayaan. Sidaa awgeed waxaa wadanka ogadenya ka dhacay gumaad joogta ah oo taariikhda meel xun ka galay ee bal aan xuso qaar ka mid aha-
Bisha Febraayo oon kusoo sifeeyay inay tahay bishii murugada iyo uurkutaalada soomaalida ogadenya maxay ku mutaysatay magacaas? Aragtidayda waxaa dhacay bisha febraayo dagaalkii lagu hoobtay ee dhex maray ONLF iyo shacabka wardheer oo dhinac ah iyo Ciindan kusheegii Males Zanawi. Waxaa magaalda ku sugnaa Gudoomiyihii Jabhadda Marxuum, Halgame Sheekh Ibrahim Cabdalle ujeedkaTigreeguna wuxuu ahaa inay qabtaan Gudoomiyaha. Nasiib wanaag guushii maalintaa waxay raacday ONLF iyo ree wardheer, Waxaa meesha kadhacay xasuuq ay ku dhamaadeen shacab fara badan. Dhacdadaas darteed ayaa dhici karta in febraayo loogu aqoonsaday bisha xuska ee xasuuqa soomaalida ogadenya! Dadka dhintay maalintaas ilaa 80 waa lasheegayay.
Wali waxaan ku jiraa dhacdooyinkii xasuuqa soomaalida Ogaadeniyee- waxaa jiray xasuuqii loogu geystay magaalada Qabridaharre dhalintii maxaabiista aheyd bishii November2005 tii. filinka muujinaya dhacdadaas ayaa ah mid si la yaab leh usoo jiitay indhaha saxaafadda oon rumaysteen hadii war ahaan loogu gudbin lahaa. Qaabkii bahdilka ahaa ee maydadka Shuhadada loo daabulayay ayaa reebay uurkutaalo gaar ah! Dadka dhintay ayaa lagu sheegay ilaa 30.
Waxaa kamid ah xasuuqyada bahalnimada ah ee ay canaasiirta guumastuhu u gaysteen shacabkaas dhacdadii magaalada Gunagado iyo nawaaxigeeda 2012 bishii Febraayo. Waxaa si insaaniyada kabaxsan loo laayaay dad shacab ah oo ka koobanaa qaybaha bulshada oy Dumar kamid ahaayeen. Tirada la xasuuqay ayaa lagu sheegay inay 30 Ruux kor u dhaafayaan.
Waxaa kamid ahaa gumaadka Guumaystuhu u gaystay shacabka xornimo,doonka ah xasuuqii magaalada Qoriile iyo Nawaaxigeeda. Ciidamo is huwan ayaa la sheegay inay xasuuqeen dad u badnaa dumar iyo caruur isugayna waxaa lagu sheegay ilaa 19 ruux. dadkaa waxaa loo laayay qaab damiirku uuna u adkeysan karin.
Waxaa kamid ahaa xasuuqa uu guumasytaha doolka ahi u gaystay ree Ogadenya kii Galaalshe iyo Nawaaxigeeda 2013. Waxaa lagu qiyaasay dadka sanadkaas la xasuuqay ilaa 300 oo ruux. Waxaa loogu marmarsiiyooday maxay jabhadda ONLF gobokiina noogu laysay? Waxaa intaa dheeraa inay kaameradu qabatay shacabka magaaladaas oo lasoo aruuriyay lana bahdilayo!
Waxaa isku fuuqsaday wixii aan soo sheegay jeelka loogu magac daray Jeel Ogaden oo caan ku noqday ciqaabta noocyadeeda kala duwan, sida biyo qabow oo la isku dhex tuuro! sida cuntada iyo cabidda oo la isu diido! sida garaacis aan loo meel dayin! sida maxaabiista oo lasoo aruuriyo kadibna lagu amro inay dharka dhigaan! sida kufsiga oo ah mid xadkii ka baxay iyo xadhigoo ah cimrigaa haku furto!
Dhacdooyinka ugubka ah een caadi ahaan ka dhici karin meel lagu sheegayo inay dawladi kajirto waxaa kamid ah Ruuxii xoolaha raacay oo waxaa la arkayaa Geed kalusha, ama dhirta lagu dhex shalwiyay ama Silig lagu mirjiyay. Tusaalaha ugu wanaagsan oo wax lagu fahmo waa midka raadkiisu qoyanyahay. Shacabka soomaalida Ogadenya waxaa laga tuuraa Baabuurta sida Daasadda wax laga cabay ama qubka Muuska!.
Waxaa u dambeeyay ruux sidaa loo dilo marxuumkii ina Cagjar!
Akhristow aniga iyo adiga oo murugaysan waxaynu leenahay اللهم ارحم شهداءنا Alloow u naxariiso shuhadadeenii, Aamiin. اللهم داوي جرحانا Alloow daawee dhaawacanaga, Aamiin. اللهم فك اسرانا Alloow soo furo maxaabiistanada, Amiin. اللهم سدد رمينا Alloow toogtanada toosi, Aaamiin. اللهم انصرنا على عدونا Alloow nooga gargaar cadowganaga, Aamiin.
Hadaan ahay qoraaga oo dhanka kale ku faraxsan habsami u socodka halganka ee ururka ONLF hogaaminayo waxaan leeyahay walalac waagi bari oo xornimada Ogadenya ayaa kaabiga saaran insha Allaah ee yaan dib la jaleecin- Allaa wayn Ninkii aaminaa awood leh.